Ukujongana nabavelisi kunye nabathengisi | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Phatha
Isiphatho sefanitshala efanelekileyo yokuhoyisela ifanitshala, elungele ukuvula ucango lweKhabhinethi kwaye idlule ngokukhululekileyo.in, mhlawumbi ucinga ukuba idlala indima encinci. Nangona kunjalo, isiphatho esitsha unganceda iingcango zakho, iikhavathi, iiwadi zinembonakalo entsha.
I-Addrith izibambo zezonyuso lwakho oluphambili. Isiqinisekiso sethu seziphatho zibandakanya iintlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo: I-ZINC ALTLES, izithambisi zentsimbi, izixhobo zentsimbi ezingenamsebenzi, zibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zeziphatho kunye neempawu ezahlukeneyo hlangabeza iimfuno zakho. Zonke iimveliso zethu ziye zavavanywa kwe-SGS ezingqongqo, kwaye isibambo ngasinye sihlolwe ngokungqongqo.
I-Adjuth Courles inokubonelela ngexabiso lakho eliluncedo kunye nomgangatho ophezulu opaselayo uvavanyo olusemgangathweni kwaye kukuzisa kunye nabathengi bakho abathi bathenga.
I-Addrith I-Prothesith Sures iveliswe ngentsimbi ephambili ekumgangatho ophezulu njengezixhobo eziluhlaza, unyango oluhle lomhlaba, lwenza ukuba lube lolutho kwaye luphucule ukukwazi ukuxhathisa i-sprasion yokutshiza ityuwa. Isitayile soyilo sihlukana nesitayile, kwaye sinokusetyenziswa kwizitayile ezahlukeneyo zefanitshala, engaphelelanga sisitayile sokuhonjiswa.
Imibala eyahlukeneyo inokwenziwa njengokhetho lwabathengi, imibala emininzi ukuze ukhethe, njenge SSS / PSS / PVD / AB / AB / AB / AB / AB. Iintlobo ngeentlobo zobungakanani ezahlukeneyo zemibhobho kunye nomngxunya osithandayo. Isicelo se-Supine-Schone, silungele ukusetyenziswa kwefanitshala enkulu njengeewadi, iincwadana. Xhasa ukugcwalisa ngokwezifiso ezikhethekileyo, unokuhambelana nomthengi'Umgama we-Hole, umbala, ubungakanani bomgangatho, ukuveliswa kweemodeli zesiko sokutsala isiphatho